Dood: addoomaha ayaa iskood u xoreeyay naftooda, iyaga oo aan sugin afgembiyayaashii ... Afrikaantii addoonsiga ku ahayd Ameerika waxay dhiseen xorriyadda ... "Tani waa waxa taariikhyahan Genevan Aline shaaca ka qaaday" | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 19, 2017 00: 20 No Comments
Qeyb weyn oo ka mid ah dadka madow ee Ameerika wakhtigii addoonsiga ahaa ma addoonin: iyadu xor bay u ahayd sababtoo ah waxay nafteeda xoreeysay ... Tani waa sawir aad u yaab leh oo rinji ah taariikhda taariikhda Genevan Ilaahay Uma Helin Addoomo Kale! Laga soo bilaabo caasinimada illaa caasimadda, sheeko fara badan oo ka mid ah xornimada (1492-1838), hawsha ugu horreysa ee si wadajir ah u soo aruuriso aqoonta kala duwan ee mawduuca ee sawirka guud.
- Waqtiga: Addoonsiga, waad qortaa, waxaad ku helaysaa seddex siyaabood. Faafinta, si loo bilaabo ...
- Aline Helg: Tani waa dhaqdhaqaaqa macquulka ah: waxaan ka baxsaneynaa xaalad aan loo adkaysan karin ...
Inta lagu jiro labadii qarniyadood ee ugu horeysay ee colonization, waxaa lagu qiyaasi karaa in 10% dadka addoonta ah ay maamusho. Meelaha aan weli dawladu xakamaynin, addoomiyayaashan ajaanibta ah - oo loo yaqaan "kedis ah" - waxay isku dhafan yihiin kuwa kale oo u dhalatay iyo Hindida.
Qaar ka mid ah beelaha Maroon ayaa aad muhiim u ah in la soo dhaafay da'da tobnaad iyo qarnigii siddeed iyo tobnaad ee boqortooyooyinka Ingiriisku iyo Isbaanishku ay saxiixaan heshiisyo, iyaga oo aqoonsanaya xorriyadooda haddii aysan soo dhaweynin tallaabooyinka cusub iyo gacan ka geysashada Boqortooyada Sare ee Milatariga marka loo baahdo ... Qaar badan oo ka mid ah bulshooyinkan ayaa weli jira maanta, oo waxay haystaan ​​xuquuq gaar ah.
Waxaa jira tusaale fiican oo loo yaqaan 'San Basilio de Palenque' oo ku yaal Kolombiya, kuwa kale oo ku yaal Suriname. Nasiib darrose, sidii reer Indiyaanka ee ka badbaaday farqiga gumeysi, dhulkooda ayaa hadda ugaarsanaya shirkadaha waaweyn ee macdanta.
- Addoono badan ayaa ku dhawaaqay in ay kufsadeen ...
Tani waa habka ugu yar ee loo yaqaan: furashada qofka xoriyada u leh. Suurtagalnimadani waxay ku jirtaa Sharciga Roomaanka, waxa lagu soo daray sharciyada Iberian ee qarnigii 11-aad iyo wixii ka dambeeyana wuxuu tagaa Ameerika oo dhan meelo Spanish iyo Portuguese ah.
Waxaa jira sharciyo gaar ah: qaddarka loo dhiibo sayidka ma aha inuu ka sarreeyo qiimaha iibsashada; waxaa suurtagal ah in lagu madax furto xorriyadiisa qayb ahaan; addoonku wuxuu soo furan karaa xorriyadda qeyb saddexaad, badiyaa cunuggiisa ... Waxaas oo dhan waxaa si aad ah loogu horumarey gumeystihii Hispano-Bortuqiiska, illaa dhammaadka addoonsiga, 1886-1888. Gumeystihii Faransiiska, Ingiriiska iyo Dutch-ka, suurtagalnimadan ayaa jirta bilowga, laakiin markii habka abuurku uu korayo, waa la baabi'iyey. Isku soo wada duuboo, waxaa la qiyaasi karaa in sedex meelood meel adoonsiga magaalooyinka Hispano-Bortuqiiska ay iibsan karaan xorriyadooda. Sida iska cad, carruurtoodu sidoo kale way xor ahaayeen.
- Addoomada xorta ah ee xorriyaddoodu badanaa waa haweenka ...
- Akhrinta macho ayaa muddo dheer u sharraxday xaaladdan iyada oo sheegtay in ay yihiin addoommo rag cadaan ah. Dhab ahaantii, daraasadda diiwaanada waxay muujinaysaa in inta badan addoommadii naftooda ay naftooda u furteen xorriyadooda. Sidee?
Haweenku way ka tiro badnaayeen ragga magaalooyinka, halkaasoo ay xaq u leeyihiin inay keligood shaqeeyaan Axadaha iyo ciidaha; waxay si tartiib tartiib ah u urursadeen ukun ukunta iyagoo maydhaya dharka ama suuqyada ku iibinaya ... Dhanka kale, waxaa jiray hab lagu xoreeyo shaqsiyaadka ragga ah, kaasoo ka koobnaa askar ahaan, gaar ahaan xilligii guutada. iyo bilowga gumeysiga. Waxaa jiray addoomo madow oo leh kuwii guuleystey, kuwaas oo mararka qaar noqota mid ku guuleysta: waxay heleen hadiyado ahaan bulshooyinka Hindida, in ay iyagu hanuuniyaan iyo in ay ka faa'iideystaan.
Suurtagalnimadaas ayaa sidoo kale la sameeyay intii lagu jiray dagaallada madax-bannaanida, markii ciidamadu wali ka maqan yihiin rag raba.
- Ugu dambeyntii waa kacaa ...
- Waxaan u qeexayaa kuwan sida abaabulidda ugu yaraan tobankiiba dadka addoonta ah, oo ku lug leh falalka rabshadaha.
Kacdoonku aad ayuu u yaryahay, lid ku ah waxa aan rumaysannay. waaweyn ee ugu horreeyey waa kan Berbice ah (u dhexeeya DeLTAS ah Orinoco iyo Amazon) ee 1763. Waxaa jira, dabcan, in Santo Domingo ka 1791, taas oo keentay in xoraynta ee addoomo jasiiradda (400 000, on imaanshaha), guuldarro oo ka mid ah ciidamada Napoleon iyo ku dhawaaqidda Jamhuuriyada Haiti ee ay u adeegsadeen shaqaalihii hore: tani waa isbedel weyn, muddo dheer la iska indho-tiray, taariikhda Ameerika ...
Saddexda kacdoon ee ugu dambeeyay waxay ka dhacaan Ingiriisida Galbeedka Galbeedku waxay ka bilaabanayaan inay xoog ku yeeshaan England; Waxay abuuraan wadahadal iyo taageero labada dhinac ah oo ay ka mid yihiin abtirsiinimada, oo ay ka caawiyaan inay keenaan.
Halkee ayuu ka yimaadaa ismaandhaafka ah in kacdoonku uu ahaa mid joogta ah?
- Mawduuca ku saabsan kacdoonka addoonku wuxuu ku yaalaa buugaag ku qoran Ameerika intii lagu jiray sanadihii 80: xilli oo ay ku calaamadsan tahay aragtida geesinimada iyo sawirka geesiga ...
Dhibaatadu waxay tahay in daraasaddan ay qaadatay dukumiintiyada maxkamadda lacagta caddaanka ah, akhrinta sida kacdoonka dhacdooyinka halkaas oo addoommadu aanay samayn wax ka badan malaha oo ka hadlaan is khilaaf. Si kastaba ha noqotee, sharciyada xoogga leh, in la tixgeliyo dilka nin cadaan ah waa mid aad u culus sida inuu dhab ahaan u dilo, oo qirashooyinka marwalba waa la jeexjeexay.
Marka loo eego reer galbeedka Britishka, maxaabiista waxaa lagu dhejiyey gacmahooda baqashada halkaasoo ay la kulmeen midba midka kale; haddii ay kula hadlay intii ay xanuunsan by innagoo magacyada addoommo kale, waxay la tixgeliyo qeyb ka yihiin waxayna ku xiran tahay ciqaab la mid ah ... Rare ahaantii fallaago, Adoonkana addoon, si kastaba ha ahaatee, waa xaalad soo noqnoqda ee maskaxda colonists, kuwaas oo u muuqda 1537 ee Mexico City oo ka gudbaya qaaradda oo dhan. Tani waa mid caqli-gal ah: inta ka dhiman muddada dhan iyo dhulka Ameerika, waxaa jira afartan jeer oo Afrikaan ah oo badan oo la tarxiilay ka badan kuwa soo galootiga ah. Aqoonyahani aad bay u badan yihiin dadka laga tirada badan yahay, mar walbana way cabsanayaan.
- Addoomayaasha, waxaad ku qortaa, waxay qorsheeyeen istaraatiijiyad sida ku cad isbeddelka xaaladda caalamiga ah iyo cilladaha nidaamka xukunka. Sideebay u ogaadeen inay wargeliyeen?
- Simple, oo sidii sayidkooda iyaga qaatay nacasyada, ay wadahadal ay wada joogaan oo Hanatay ... Bal qiyaas planters la kulmo Gudoomiyaha sigaarka waaweyn, waxay cambaarayn go'aamada boqorka iyo aragto in ay jiraan wuxuu leeyahay askar ka yar sababtoo ah dagaalkii u dhexeeya Faransiiska iyo England; Addoommaduna wax bay u tari doonaan, oo way dhegaysan doonaan. dadku waxay akhrin karaan oo waxay hubin doonaan wararka wargeyska ...
Dhinac kale oo yar oo caan ah ayaa ah khudbadii ay soo diyaariyeen adoomada si ay u difaacaan xorriyadooda. Waxaa jira dacwado adduunka Iberian dabayaaqadii qarnigii siddeed iyo tobnaad halkaas oo adoomadu u tixraacaan falsafadda xuquuqaha dabiiciga ah: Eebbe wuxuu abuuray dhammaan ragga oo la siman ... Degmooyinka Protestant, halkaas oo wacdinta ay ku lug leedahay akhrinta Kitaabka Quduuska ah Addoomayaashu waxay u isticmaali doonaan sheekada caruurnimada Cibraaniyada ee Masar iyo xorriyadooda si ay u dhisaan nooc ka mid ah fiqiga xorta ah waqtiga ka hor. Waxay ku tiirsan yihiin Kitaabka Quduuska ah in la yiraahdo: Sababta oo ah waa tan uu Ilaahay doonayo, oo sayidkeenna ay tahay inuu adeeco isaga ...
- Maxay tan oo dhan ku saabsan tahay adoonsiga?
- Ugu horreyntii, waxay sheegaysaa in kelinimada ay iyagu ahaayeen. Kalasoocida kaliya waxay ka bilaabataa sanadaha 1760. Ilaa intaa ka dib, addoonku waa gabi ahaanba kali kali ahaan bulshooyinka aan xitaa aqoonsanin sida ay yihiin: waxay yihiin "alaab la guuro" sida waafaqsan sharciga ...
Xaaladahan, haysashada mashruuc nool oo ka kooban xor ah naftooda waxay muujinaysaa xoog, adkeysi aan caadi ahayn, dareen ah naftiisa oo ah mid cajiib leh. Waxaan ka fogeynaa sawirka, kaas oo la rifay mudo dheer, gabadha oo gebi ahaanba madow, iyada oo aan wax kheyraad ah ka helin. Taas bedelkeeda, Addoomayaashu waxay ahaayeen kuwo ka shaqeeya taariikhdooda; inkastoo ay xaaladaas tahay, waxay doonayeen inay door ka qaataan noloshooda.
- Tani waa sida "Ameerika kale si xikmad leh loogu dhisay", marka loo eego qaaciidadaada. Muxuu adduunka "midab la’aanta" u eg yahay?
- Waa caalam shaqaale ka shaqeeya magaalooyinka, haweenka magaalada, madaxda qoysaska. Sidoo kale waa dhul miyiga ah ee llaneros - godadka buuraha - iyo dadyowga.
Dunida loola dhaqmi doono ka dib marka la galo gumeysiga madaxbanaan, ka dibna "jinsi" dhammaadka qarniga 19aad. Waxaa jiri doona dib u soo laabasho weyn: adigoo addoonsi ah waa la tirtiray in "sayniska" cunsuriyaddu ay qaadato.
Marka laga takhaluso, si fiican, waxay baabi'yeen addoonsiga iyagoo magdhow ka dhigaya sayidyada, laakiin waxay ku fureen adoomihii hore wax yar ka dib. Adduunkan aad ayuu u silcayaa dabayaaqadii sagaal iyo tobnaad iyo bilowgii qarnigii labaatanaad.
Inta lagu guda jiro horumarinta qaran-gobolka iyo dhaqaalaha dhoofinta, waxay ku dhibtoonaysaa in ay hesho booskeeda waddanka. Inkasta oo nasiib-darro ahaan, dadweynaha "xor ka ah midab" badanaa waxay u taagan yihiin aqlabiyadda ... Maanta, deeqaha dhaqameedka iyo farsamada ee addoonta ah ee samaynta iyo horumarinta Ameerika waa la aqoonsaday: ma jirto waddan of America in la qeexi karaa iyada oo aan xusuusin this deeqdan weyn. Kuwani dhammaantood waa wax aan caadi ahayn maadaama ay addoommadu soo saaraan qaybaha yaryar ee ka hadhsan noloshooda.
Aline Helg, "Marna addoono! Laga soo bilaabo caasinimada illaa laga soo asbaaro, sheekada weyn ee xoriyada (1492-1838) "(Discovery)
Sep30 04: 25